Monday March 18, 2019 - 11:47:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogag Jihaadi ah oo taabacsan Urur weynaha Al Qaacidda ayaa weerar askar badan lagu laayay ka fuliyay wadanka Maali ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Wararka ka imaanaya gobolka Mopti ee dhaca bartamaha wadanka Maali ayaa sheegaya in xoogag aad u hubeysan ay cagta mariyeen saldhig melleteri oo ciidamada xukuumadda dabadhilifka Maali ay ku lahaayeen degmada Diyoora sida uu sheegay afhayeen u hadlay melleteriga wadankaasi.
Weerarka oo ahaa mid si kedis ah ku dhacay ayaa lagu dilay ugu yaraan 20 askari oo katirsan Jeyshka Maali oo taageero ka helaya wadamada Reergalbeedka oo ay ugu horreeyaan Faransiiska iyo Mareykanka.
Ilo wareedyo lagasoo xigtay saraakiisha Ajnabiga ah ee ku sugan wadanka Maali ayaa sheegay in dhimashadu ay ka badantahay 20 askari islamarkaana lala'yahay ciidamada qaar waxaana suurtagal ah in xoogagii weerarka qaaday ay askarta qafaasheen.
Sarkaal u hadlay dowladda Maali ayaa warbaahinta u sheegay in xoogaga weerarka soo qaaday ay wateen gaadiidka Tikinikada ah iyo Mootooyin dhug dhugleey ah, jugta qaraxyo is xigxigay ayaa laga maqlay saldhigga ciidamada ee degmada Diyoora.
Weerarkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu Video cusub kasoo muuqday Sheekh Maamadu Kuufu oo kamid ah hoggaamiyaasha Jihaadka ee caanka ah wadankaasi Maali, isbaheysiga Saaxilka ee G5 iyo ciidamo Faransiis ah oo gaaraya 4500 oo askari ayaa ku guuleysan waaye in ay baajiyaan weerarada Ururka Al Qaacidda oo si xowlli ah ugasii socda gudaha Maali iyo wadamada dariska la ah sida Burkina Faaso iyo Niger.